fahatrarana vato « crystal » : andrasana ny fanadihadiana - ewa.mg
fahatrarana vato « crystal » : andrasana ny fanadihadiana
News - fahatrarana vato « crystal » : andrasana ny fanadihadiana
mbola mitohy ny fanadihadiana ny raharaha momba ilay talena
orinasam-panjakana lehibe iray nitondra ireo vato
« crystal » andro vitsy lasa izay. Efa nisy ny fitanana
an-tsoratra nataon’ny zandary avy ao Farafangana mahakasika ny
tranga ary efa nalefa eny anivon’ny « police des mines »
Tsiahivina fa saron’ny mpitandro
filaminana tao Manambotra-Farafangana ny fiara tsy mataho-dalana
nitondra ireo vato sarobidy ireo ny 5 jona lasa teo. Tao anatina
gony 13 isa milanja 200 kilao ireo harena an-kibon’ny tany
tamin’izany. Tsy nisy ny taratasy mazava momba ireo vato tratra.
Voalaza fa avy any Vangaindrano ireo vato ireo ary saika hoentina
tao Fianarantsoa ireo izao tratra izao. Taorian’izay, nogiazana ao
amin’ny zandary ao Farafangana ireo vato sarobidy ireo. Nisokatra
nanaraka izay ny famotorana ny raharaha.
L’article fahatrarana vato « crystal » : andrasana ny fanadihadiana a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fifindran-toeran’Ilahimaharitra: mitaky 3 tapitrisa euros ny Charleroi FC
Tsy mbola tena milamina ny ho fifindran-toeran’Ilahimaharitra Marco, hilalao any amin’ny FC Metz, diviziona voalohany frantsay, amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Misy ny sakana tsy ahafahana manatanteraka izany eo amin’ny Charleroi FC, ekipa any Belzika misy azy ankehitriny, sy ny FC Metz.Mitaky lelavola 3 tapitrisa euros na 13 500 000 000 Ar malagasy ho saran’ny fifindran-toerany mantsy ry zareo Charleroi. Ilahimaharitra Marco izay efa tsy mazoto intsony ny hijanona any Belzika. Raha tsiahivina, manodidina eo amin’ny 600 000 euros na 2 700 000 000 Ar isaky ny taom-pilalaovana ny karama homen’ny FC Metz azy.Etsy ankilany, ambaran’ny Charleroi fa efa mahatratra any amin’ny 5 tapitrisa euros ny vidin’ity mpilalao malagasy ity, amin’izao fotoana izao. Mihevitra ireo mpitantana any Belzika ny hanalava ny fifanarahana amin’Ilahimaharitra Marco, hatrany amin’ny 30 jona 2023.Miandry ny valin-tenin’i Bernard Serin, filohan’ny FC Metz, izany ny rehetra raha toa ka ekeny ny handoa io vola tadiavin’ny Charleroi ho takalon’ny fandehanan’Ilahimaharitra Marco hifindra any Frantsa io. Nanambara i Vincent Hognon, mpanazatra ny FC Metz, fa mpilalao tena ilainy i Marco hanatevina ny fiarovantenan’izy ireo.25 taona Ilahimaharitra ankehitriny ary tena ao anatin’ny tanjany tanteraka. Nahavita lalao 96 izy, tao amin’ny Charleroi, tamin’ity taona 2020 ity. Nahatafiditra baolina efatra ny tovolahy, tamin’izany.Tsiahivina fa anisan’ireo mpilalao nantsoin’i Nicolas Dupuis hanatevina ny Barea amin’ny fiatrehana ireo lalao fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny “Can 2021” sy ny “Mondial 2022” Ilahimaharitra Marco. TompondakaL’article Kitra – Fifindran-toeran’Ilahimaharitra: mitaky 3 tapitrisa euros ny Charleroi FC a été récupéré chez Newsmada.
Fanehoan-kevitra etsy sy eroa : handeha hatramin’ny farany hanao fifidianana ny Ceni
“Fanomanana fifidianana no asa sy iraka goavana be ampanaovina azy. Mandritra ny fe-potoam-piasan’ny Ceni, rehefa voahaja ny lalàna: tsy tokony ho avy aminy ny tsy fahavononana nefa tonga ny fotoana anaovana fifidianana. Maka bahana hatrany izy amin’ny fanomanana sy fanatanterahana fifidianana.”Izay ny fanazavan’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, manoloana ny adihevitra na ny fisian’ny fanoherana ny fanatanterahana fifidianana loholona hatao amin’ny 11 desambra ho avy izao. Amin’ny maha mpikarakara fifidianana ny Ceni, mandeha ny asa na mandeha aza ny adihevitra. Efa nisy teto amin’ny firenena, ohatra, ny fikasana hanao fitsapan-kevi-bahoaka. Niomana amin’izay avy hatrany ny Ceni, raha vao nandre izay, mba tsy ho tratran’ny ady tampoka na ny ady tsy ahi-mahatratra.Efa tonga tamin’ny fanaovana antsapaka amin’ny hiatrehana ny fitsapan-kevi-bahoaka ny Ceni tamin’izany. Nilaza ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), tamin’izany, fa tsy mbola tokony hotanterahina ny fitsapan-kevi-bahoaka, ka nihemotra ny rehetra. Aleon’ny Ceni izany toy izay variana amin’ny adihevitra ka tonga ny androm-pifidianana nefa tsy tomombana ny asany. Misy fiantraikany amin’ny fifidianana izay, na tsy tanteraka ny fifidianana.R.Nd. L’article Fanehoan-kevitra etsy sy eroa : handeha hatramin’ny farany hanao fifidianana ny Ceni a été récupéré chez Newsmada.
Fiompiana: tokony ho ambony vidy ny akoho gasy
Tokony ho ambony vidy ny akoho gasy no ho ny akoho biolojika (poulet de chair) eny amin’ny tsena, na amin’ny tsena iraisam-pirenena aza, raha misy mpandraharaha mitady lalana amin’ny fanondranana azy. Voamarina fa ankifizin’ny mpanjifa maro ny akoho gasy, na ireo vahiny mandalo eto an-toerana. Akoho tsy omena sakafo simika.Ho fanomezan-danja ity lalam-pihariana iray ity, nisy fiofanana nomen-dRatefiarison Mandrindra, teknisianina momba ny fiompiana, hanatevina ny fahaiza-manao eo amin’ny fiompiana akoho gasy. Fiofanana andiany voalohany tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, ary mbola hitohy ny asabotsy ho avy izao. Nahasarika mpiompy maro tamin’ny voalohany teo, sady fihariana famoronana asa. “Sehatra mbola malalaka sy tokony hampidi-bola betsaka ho an’ny mpiompy izay misafidy azy”, hoy ny mpampiofana.Misy mpiompy sasany, ohatra, tsy manao afa-tsy mivarotra zanak’akoho gasy iray na roa volana, mahalafo 200 hatramin’ny 300 isam-bolana. Arahina amin’izany fiofanana izany koa ny fitandrovana ny fahasalaman’ireo akoho ireo amin’ny fanaovana vaksiny azy miaro amin’ny pesta sy ny barika, ny refin’ny trano ametrahana, araka ny isany, ny sakafo omena azy. Misy ihany koa toro lalana ho an’izay mitady famatsiam-bola hoentina mihary. Izany no atao mba hahamatihanina ny fiompiana. Mbola tsara lavitra ny kalitaon’ny akoho gasy amin’ny lafiny rehetra : tsiro sy fahasalamana hoentiny ka tokony hakarina ambony koa ny vidiny. R.MathieuL’article Fiompiana: tokony ho ambony vidy ny akoho gasy a été récupéré chez Newsmada.
Fampandrosoana ny eny ambanivohitra : tsy fantatra mazava ny fampiharana ny tetikasa Padap
Aiza ho aiza izao ny tetikasa Padap*, fampandrosoana ny eny ambanivohitra? Tetikasa maharitra dimy taona, natomboka tamin’ny 2017 ary tokony hifarana amin’ny 2022.Mba hampihenana ny fahasimban’ny tontolo iainana sy hanomezan-danja ny seha-pamokarana, niara-namatsy vola 100 tapitrisa euros ny AFD, ny Banky iraisam-pirenena, sy ny Tahiry ho an’ny tontolo iainana eran-tany nanohanana tetikasa ho an’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra amin’ny fanatsarana ny manodidina (Padap). Minisitera telo ny miandraikitra ny tetikasa: misahana ny fambolena, ny tontolo iainana, sy ny rano.Voalaza hatramin’izay fa 80% amin’ny Malagasy ny monina any ambanivohitra. Antontanisa mety tsy ho marina intsony amin’izao vanin’andro ankehitriny izao, saingy azo antoka fa mbola betsaka ny mponina any ambanivohitra ary mihamahantra. Simba ny tontolo iainana, ratsy ny lalana, tsy misy herinaratra, fotodrafitrasa maro tsy ampy. Izany ny any ambanivohitra eto Madagasikara amin’izao taonjato faha-XXI izao.Tsy mahavita tena amin’ny lafiny maro eo amin’ny vokatra tena ilaina ka voatery manafatra avy any ivelany: vary, lafarinina, menaka, siramamy, vovo-dronono. Maivana ny vokatry ny fambolena ary kely velarana ny faritra voavoly. Antony miteraka fahantrana lalina eto Madagasikara.Simba ny tany efa kely velarana volena ary vao mainka mahakely ny vokatra; manana velaran-tany midadasika anefa i Madagasikara sy olona maro afaka miasa. Tsy maintsy miainga amin’ny fiarovana ny natiora sy ny manodidina ny fambolena. Faritra efatra nosafidina nanaovana ny tetikasa Padap: i Sava, Analanjirofo, i Sofia, i Boeny. Jerena ny tontolo manodidina any ambanivohitra any amin’ireo faritra ireo ahafahana mahazo vokatra betsaka avy amin’ny ilay tetikasa, saingy tsy hita ny fiantraikan’izany hatramin’izao.Tsy misy ny fitohizan-draharaham-panjakanaNy fiantraikany toekarena nandrasana ny fitombon’ny vokatra hampitombo ny fidiram-bola. Tsy mihitsoka intsony ireo kaominina any ambanivohitra, ny fambolen-kazo ahazoana angovo, fahazoana rano madio fisotro sy ho an’ny fambolena, ary fiambenana ireo faritra arovana hisarihana mpizahatany. Mitaky fitantanana tsara any anivon’ny kaominina anefa izany. Tsy misy mahavaly izay fitohizan-draharaham-panjakana momba ny tetikasa Padap izay ny eny amin’ny toerana tokony ho nanatanterahana izany, ao ny ben’ny Tanàna sasany tsy mahafantatra ny fisian’izany akory. R.Mathieu Padap * : Promouvoir une agriculture durable par l’approche paysageL’article Fampandrosoana ny eny ambanivohitra : tsy fantatra mazava ny fampiharana ny tetikasa Padap a été récupéré chez Newsmada.
“Tsy hoe misy tsy mety ny namindrana azy ireo fa amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa: mba mahazo traikefa be dia be ireo mpitsara ary mifindrafindra toerana. Tokony ho iray ny fomba fitsarana ka fanavaozana fahalalana ny famindran-toerana. Mba tokony hiezaka hanana karazana fisondrotana eo amin’ny asa koa ny sasany.” hoy ny minisitry ny Fitsarana, Andriamahefarivo Johnny Richard, teny Faravohitra, tamin’ity herinandro ity. Mpitsara miisa 100 mahery tamin’ny fanapahan’ny fivorian’ny Filankevitra ambony momba ny mpitsara (CSM) notarihiny.Manahirana rehefa ela loatra amin’ny toerana irayTsy maintsy mandeha mba hitovy fahalalana sy mitondra ny fahaizany any amin’ny faritra hafa ireo ela loatra amin’ny toerana iray. Misy mpitsara mpamoaka didy, mpitsara mpanao famotorana…Natao hifandimbidimby toerana ny mpiasam-panjakana. “Miezaka izahay mba tsy hampaharitra an’izay satria maro ny kazarana fanakianana”, hoy izy. Rehefa ela eo amin’ny toerana iray, manjary manana fifandraisana manahirana: sahirana ny mpitsara, ny olona koa sahirana.R.Nd.L’article CSM : mpitsara 100 mahery no afindra toerana a été récupéré chez Newsmada.